အကွောငျး — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဝါကွှားရန် built လူငယ်တစ်ဦးမှအစိုင်အခဲသမ္မာကျမ်းမှနျတရားကိုဆကျသှယျဖို့တည်ရှိ, ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်အစွမ်းထက်နည်းလမ်းများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပရိသတ်ကို. ခရီးစဉ် Lee ကကဦးဆောင်, စာရေးဆရာ, ဆရာမ, နှင့် hip-hop အနုပညာရှင်, ဝါကွှားစေရန်တည်ဆောက်ထားသူတို့၏သခင်အပေါ်ဝါကွှားမှ unashamed နေသောခရစ်တော်နောက်လိုက်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုတပ်ဆင်နှင့်အားပေးဖို့ကိုရှာတတ်၏.
ခရီးစဉ် Lee ကစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်, ဆရာမ, hip-hop အနုပညာရှင်, နှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်. အတ္တလန်တာတစ်သင်းအုပ်ဆရာ, သူမှန်မှန်ခရစ်ယာန်ညီလာခံနှင့်ဖြစ်ရပ်များမှာဟောပြောခြင်းနှင့်သွန်သင်, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနားထောငျသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလသူ့ရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေခဲ့သည်.
သူ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ထဲတွင်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, ကမ္ဘာကြီးကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်ဘာမှကျော်လွန်တဲ့ဘဝ - Lee ကသာခရစ်တော်အားရရှိနိုင်သောအပေါများဘဝထောက်ပြသည်. သူ၏ဒုတိယစာအုပ်, တက်, ဘုရားသခငျသညျလိုကျလြှောကျဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်မမျိုးဆက်သစ်တွေကိုခေါ်, ဒါပေမဲ့တက်ရနှင့်ယခုအသက်ရှင်ရန်.
တစ်ဦး hip-hop အနုပညာရှင်အဖြစ်, Lee ၏ဂီတဝေဖန်ကောင်းချီးလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ကြီးမားတဲ့နှင့်ကြီးထွားလာပရိသတ်ကိုရောက်ရှိစဉ်. သူကတစ်ဦးကြယ်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ရဲ့အများအပြားချိုးငှက်ဆုပေးပွဲများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့. သူ၏နောက်ဆုံးသုံးအယ်လ်ဘမ်မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြပါပြီ #1 အ Billboard ဧဝံဂေလိတရားဇယားအပေါ်, နှင့်သူ၏လတ်တလောအယ်လ်ဘမ်, တက်, မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီး #2 အ Billboard Rap ဂီတဇယားပေါ်နှင့် #16 အ Billboard အပေါ် 200.
သူ့အစာအရေးအသားအတွက်ခရီးစဉ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအလိုဆန္ဒ, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း, နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သညျယရှေုခရစျ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေကိုကြေညာရန်ဖြစ်ပါသည်.
သင်ပေးဖို့ခရီးစဉ် Lee ကစာအုပ်ဆိုင်မှ, တရားဟောပွော, သို့မဟုတ်သင့်အဖြစ်အပျက်မှာလုပ်ဆောင်, WME ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.